कोरोना नियन्त्रणका जटिलता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कोरोना नियन्त्रणका जटिलता
संक्रमणको फैलावट रोक्ने, समयमै परीक्षण गरेर पत्ता लगाउने र उपचार गर्ने तीनै मोर्चामा हाम्रो तयारी फितलो भयो भने इरान र इटालीझैं नेपाललाई पनि यसले तहसनहस बनाउनेछ ।
चैत्र ७, २०७६ जीवन क्षत्री
यी पंक्ति लेखिंदै गर्दा नोवेल कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका २ लाख १९ हजार मानिसमध्ये ८५ हजार मात्रै ठीक भएर दैनिक जीवनमा फर्केका छन् । अर्थात्, १ लाख ३० हजारभन्दा बढी मानिस एकसाथ यो भाइरसका कारण सामान्यदेखि जटिलसम्मको स्वास्थ्य समस्यामा छन् । त्यसरी बिरामी हुनेको संख्या निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । ८ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
विश्व अर्थतन्त्रमा अचानक ब्रेक लागेको छ । धेरै उद्योग र कलकारखाना बन्द छन् । महामारीको प्रभाव कम हुने क्षेत्रहरूमा समेत छोटो दूरीका अत्यावश्यक यात्रा गर्नबाहेक मानिसहरू बाहिर निस्कने क्रम घट्दो छ । विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको डरसँगै सेवामा आधारित व्यवसायका बीसौं करोड मानिसहरूका लागि दिगो बेरोजगारी डरलाग्दो सम्भावना बनेर अगाडि आएको छ ।
महामारीका यी आर्थिक चुनौतीसँग अन्यत्रका जस्तै हाम्रो राज्यले पनि नजुधी धर पाउनेछैन । तत्काललाई भने सरकार लगायत हामी सबैको पहिलो प्राथमिकता संक्रमणको फैलावट रोक्ने र मानिसको ज्यान बचाउने हुनुपर्छ । यसबीच सम्भावित बिरामीहरूको उपचारका लागि पूर्वाधार र उपकरणको जोहो जति महत्त्वपूर्ण छ, महामारीको असर न्यूनीकरणका माध्यमहरूबारे सही सूचनाको प्रवाह र विश्वासको वातावरण निर्माण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
सरकारले यो चुनौती खेप्ने तयारी गर्दैगर्दा के स्विकार्नु जरुरी छ भने नेपालमा अहिले कायम स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रणाली सामान्य अवस्थामा समेत सबै नागरिकलाई आवश्यक सेवा दिन अपर्याप्त छ । त्यसमा पनि सरकारी वा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको आवश्यकता अनुसार क्षमता विस्तार नहुँदा ती अहिले नै क्षमताभन्दा निकै बढी बिरामीलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्थामा छन् । हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार कति नाजुक र अपर्याप्त छ भन्ने त अघिल्लो वर्षको डेंगु महामारीका बेला उदांगो भएको थियो । त्यो महामारीको उत्कर्षका बेला केही सहरका सबै सरकारी र निजी अस्पतालका सबै बेड भरिएपछि भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीलाई समेत घरै फर्काएर उपचार गरिएको थियो ।
अर्कातिर, कोरोनाका बिरामीका लागि अस्पताल र आईसीयु बेडहरू छुट्याउने योजना बनाउँदै गर्दा के पनि भुल्नु हुँदैन भने, संक्रमण फैलिएको अवस्थामा हामीलाई सामान्यतया अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराउने आम बिरामी र कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार एकसाथ गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि अस्पतालको साबिक सेवा अवरुद्ध गरेर स्रोतसाधन यो महामारीका लागि छुट्याउने सुविधा हामीसँग छैन ।
यसबीच सरकारले २३५ आईसीयु बेड र १ हजार आइसोलेसन बेड तयारी राख्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंका शुक्रराजसहित छ अस्पतालमा १२० र वाग्मती बाहिरका ६ प्रदेशमा ११५ आईसीयु बेड तयार गर्ने भनिएको छ । त्यसको अर्थ सबै बेड थप्ने हो वा हाल अन्य बिरामी रहेका बेड छुट्याउने मात्रै हो भन्नेमा महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाइएको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले प्रस्ट पारेको छैन । वीर र पाटनजस्ता अस्पतालमा रहेका साबिक आईसीयु बेड कोरोनाका लागि छुट्याइएको हो भने त्यसले आम बिरामीको आईसीयु सेवामा रहेको यसै निम्छरो पहुँचलाई झनै संकुचित गर्ने देखिन्छ ।
कीर्तिपुरको आयुर्वेदसहित अन्य अस्पतालमा पनि आईसीयु बेड थप्ने निर्णय गरिएको भए त्यो अवश्य स्वागतयोग्य कुरा हो । तर आईसीयु बेडहरू बढाउनु भनेको वार्डका बेड थप्नुभन्दा फरक हो । कोरोना भाइरसले गराउने जटिलताहरूको प्रकृति हेर्दा भेन्टिलेटरलगायत श्वास–प्रश्वास सहज गर्ने सुविधा त्यस्ता बेडका लागि अनिवार्य हुनेछ । सरकारले केही दिन वा सातामा सयौं भेन्टिलेटर खरिद गर्न सक्छ? सबैतिर एकैचोटि माग बढेको अहिलेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तिनको आपूर्तिको अवस्था के छ? बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध नभएका भेन्टिलेटरजस्ता उपकरण हात पार्न सरकारले कस्ता कूटनीतिक पहलहरू गरिरहेको छ? यी प्रश्नको जवाफ नपाई सरकारको तयारीबारे ढुक्क हुने अवस्था छैन ।
उपकरण र पूर्वाधार भए पनि आइसोलेसन वा सामान्य वार्डझैं रातारात आईसीयु बेडहरू सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव हुँदैन । अन्य प्रयोजनका लागि बनेका भवनलाई आईसीयुमा परिणत गर्न भित्ताहरू भत्काउने लगायत भवनको संरचनामै बदलाव ल्याउने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तिनका भुइँ र भित्तालाई सहजै सफाइ र निर्मलीकृत गर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने हुन्छ । अक्सिजन आपूर्तिको अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी सबै भएर बेड तथा उपकरणहरू राखिसकेपछि सेवा दिन तत्पर अतिरिक्त जनशक्ति परिचालन गरिनुपर्छ ।
कोरोना महामारीको तयारीस्वरूप सयौं आईसीयु बेड तयार गर्ने निर्णय गरेको सरकारले त्यसयता यस्ता कति काम गर्‍यो? भेन्टिलेटर खरिदमा केकति प्रगति भयो? अक्सिजन आपूर्तिको व्यवस्था गर्दा कस्ता कमजोरी वा चुनौती फेला परे? मेडिकल अक्सिजन बनाउने नयाँ प्लान्ट नै पो बनाउनुपर्ने भयो कि? आईसीयु सञ्चालनका लागि सरकारी सेवामा आवश्यक कति जनशक्ति थपियो? खोजेजति जनशक्ति पाइयो कि पाइएन? यदि केही अस्पतालमा कोरोनाको उपचार केन्द्रित गर्ने हो भने त्यहाँका साबिक बिरामी अन्य सरकारी अस्पतालमा पठाउनुपर्ने हुन सक्छ । तिनको उपचार गर्न ती अरू अस्पतालको क्षमता कति विस्तार भयो? तिनका अपरेसन थिएटर र आईसीयुको क्षमता बढाउने काम कति भयो? सम्भावित महामारीसित जुध्ने कामको नेतृत्व गर्न सरकार तयार छ भन्ने सन्देश दिनयी सबै प्रश्नको नियमित रूपमा उत्तर दिने गरी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सूचना प्रवाह गर्नु आवश्यक छ ।
हाम्रोभन्दा कैयौं गुणा राम्रो र बलियो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भएका विकसित देशहरूका हकमा समेत महामारीसँग जुध्ने यस्तो तयारी अपूरो देखिएको छ । हाम्रोभन्दा निकै बलियो अर्थतन्त्र रहेका देशहरू पनि यो महामारीबाट निकै त्रस्त छन् । त्यसैले हाम्रा लागि यो तयारी निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर अहिले चाहिँदो तयारी नगर्नु भनेको महामारी फैलिसकेको अवस्थामा अनावश्यक रूपमा मानिसको ज्यान गएको टुलुटुलु हेरेर बस्नु हो ।
चीनमा उक्त संक्रमण देखा परेयता यसै पनि झन्डै अढाई महिनाको समय हामीले असमञ्जसमा खेर फालिसकेका छौं । देशभरका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्वासमा लिएर महामारीविरुद्ध युद्धस्तरको तयारी गर्नुपर्ने सरकार डाक्टरलाई पढ्न वा तालिम गर्न विकसित देश जानबाट रोक्ने तथा सेवाबाट बाहिरिन चाहने एकाध डाक्टरको राजीनामा स्वीकार नगरेर प्रतिशोध साध्नेजस्ता नाजायज र फाल्तू काम गरेर बसिरहेको छ । पछिल्लो समय घोषणा गरिएका ठोस तयारीका जुन कदमहरू छन्, ती अनुसार काम भइरहेको छ भन्नेमा सरकारले यो विषयका जानकारहरूलाई आश्वस्त गराउन सकेको छैन ।
यो संवेदनशील समयमा सरकारमा भएका व्यक्तिहरूले आय–आर्जन र प्रतिशोधको साँघुरो घेराबाट माथि उठेर विज्ञहरूका सुझाव ग्रहण गर्दै सही अर्थमा जनताको सेवकको भूमिका निभाउनु जरुरी छ । जुन दिन महामारी नियन्त्रण भइसक्छ, त्यसपछि समेत देशको थलिएको अर्थतन्त्रलाई बौराउने झनै चुनौतीपूर्ण काम हाम्रा सामु बाँकी रहनेछ । अरबका तेल कम्पनीदेखि नेपालको पर्यटन व्यवसायसम्मलाई प्रभावित गरेको यो महामारीको आर्थिक प्रभावसित आउने लामो समयसम्म हामीले लड्नुपर्नेछ ।
यो महामारी आएपछि पक्कै गुज्रेर जानेछ । संक्रमणको फैलावट रोक्ने, समयमै परीक्षण गरेर पत्ता लगाउने र उपचार गर्ने तीनै मोर्चामा हाम्रो तयारी फितलो भयो भने इरान र इटालीझैं नेपाललाई पनि यसले तहसनहस बनाउनेछ । अर्कातिर, दक्षिण कोरियाले झैं तीनै मोर्चामा राम्रो तयारी गर्न सक्यौं भने हामीले पनि न्यूनतम क्षतिमा यो कहरबाट मुक्ति पाउनेछौं । उल्टै महामारी सकिएपछि हामीसित अतिरिक्त उपलब्धि पनि हुनेछ— नेपालका सरकारी अस्पतालहरूको सघन उपचार क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढेका कारण विपन्न नेपालीहरूले घरखेत बेचेर निजी अस्पतालका आईसीयुमै उपचार गराउनुपर्ने वा सेवा नै नपाई ज्यान गुमाउने क्रम घट्नेछ ।
प्रकाशित : चैत्र ७, २०७६ ०८:४९
फाल्गुन २१, २०७६ जीवन क्षत्री
सन् १९१८–२० को विश्वव्यापी इन्फ्लुएन्जा महामारी सकिएको ठ्याक्कै सय वर्षपछि अहिले हामी इन्फ्लुएन्जाको अर्को वैश्विक महामारीको संघारमा छौं । ऊ बेलाभन्दा सूचनाको प्रवाह अहिले अत्यन्त तीव्र छ, तर यस क्रममा सहीसँगै गलत सूचना पनि प्रवाह भइरहेका छन् । त्यसैले खास गरी आम नागरिकका लागि कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) र महामारीबारे सही सूचनाको महत्त्व अहिले पनि त्यत्तिकै छ ।
कति डराउने ?
चीनभित्र भन्दा बाहिर धेरै नयाँ संक्रमित देखिन थालेसँगै चीन र सीमित अरू देशमा मात्रै संक्रमण रोकिने सम्भावना अब लगभग समाप्त भएको छ । नेपालमा पनि अब आउला कि भन्ने प्रश्नभन्दा आएको अवस्थामा कसरी जुध्ने भन्ने प्रश्न बढी सान्दर्भिक भइसकेको छ । उसो भए महामारी भित्रिएको अवस्था कत्तिको डरलाग्दो होला त ?
चीनमा सुरुका ४५ हजार बिरामीमा गरिएको अध्ययन अनुसार, कोभिड–१९ भाइरसको मृत्युदर २.३ प्रतिशतजति छ । त्यो यसअगाडिको सार्स (१० प्रतिशत) र मर्स (३० प्रतिशत) भन्दा कम हो, तर इन्फ्लुएन्जाकै अरू प्रजातिले गराउने मौसमी रुघाखोकी (बढीमा ०.१ प्रतिशत) भन्दा निकै बढी हो । स्पेनिस फ्लुको मृत्युदर पनि २.५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो । तर झन्डै ५० करोड मानिसलाई संक्रमित गरेकाले उक्त महामारीका कारण करोडौं मानिस मारिएका थिए । कोभिड–१९ को सबैभन्दा डरलाग्दो पक्षचाहिँं यसको तीव्र सर्ने क्षमता हो ।
व्यावहारिक रूपमा भन्दा, हाम्रो देशमा महामारी भित्रिएर ठूलो भूभागलाई प्रभावित गर्‍यो भने ३०० जना चिनारु हुने मानिसका छ वा त्योभन्दा बढी परिचितको मृत्यु हुन सक्नेछ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी जोखिममा वृद्धवृद्धा र रोगप्रतिरोधी क्षमता कम भएका तथा धूमपान लगायतका कारण फोक्सो कमजोर भएका मानिसहरू हुनेछन् । तुलनात्मक रूपमा बच्चाहरू र ३० वर्षमुनिका युवामा संक्रमणका जटिलता कम हुने गरेको चीनमा हाल देखिएको छ ।
नेपालमा अझ केही साता ढिलो गरेर संक्रमण भित्रियो भने मौसम हाम्रा लागि अनुकूल हुन सक्नेछ, किनकि कोरोना भाइरसको फैलावट र जटिलता जाडोमा बढी हुने गर्छ । सन् १९१८ को वसन्त ऋतुमा सुरु भएको स्पेनिस फ्लु गर्मी र वर्षात्भर सुषुप्त रहेर हिउँदमा भीषण रूपमा फर्केसँगै संक्रमण र मृत्युदर चुलिएको थियो । यसपल्ट चीनले चिसोमा फैलिन भ्याएको संक्रमणको दुर्भाग्य भोगिसकेको छ । आधुनिक औषधि विज्ञानका कारण यो हिउँद छलिसकेका देशहरूले चाहिँ अर्को हिउँदसम्ममा महामारीको प्रतिरोध गर्ने क्षमता उल्लेख्य बढाउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो अस्तव्यस्त स्वास्थ्य प्रणाली भएको देशले पनि कैयौं महिनाको तयारी गर्न पाए महामारीको क्षति कम हुन सक्नेछ ।
स्पेनिस फ्लुको भयावह पक्ष के पनि थियो भने, अध्येता जेफ्री टबेनबर्गरका अनुसार, मृत्यु हुनेमध्ये आधा मानिस २० देखि ४० वर्षसम्मका थिए । स्वस्थ युवाहरूमा गम्भीर जटिलता देखिने दर झन् धेरै थियो । महामारीको पहिलो वर्षमा अमेरिकाको सरदर आयु नै १२ वर्षले घटेको थियो । हालसम्म युवा जनसंख्यामा कोभिड–१९ को जटिलता र मृत्युदर कम छ । यसको डरलाग्दो पक्ष के छ भने, आधुनिक औषधि विज्ञानको यत्रो फड्कोका बावजुद भेन्टिलेटर जस्ता अत्याधुनिक सुविधा पाउने बिरामीहरूको मृत्युदर पनि उल्लेख्य छ । खास गरी युवा उमेरका त्यसमाथि स्वस्थ डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरूकै मृत्युले त्रास थपेको छ ।
नेपालमा सघन उपचार सेवाको ‘रिजर्भ’ शून्यप्राय: भएको र भेन्टिलेटर सेवा अत्यन्त न्यून संख्यामा रहेका कारण मृत्युदर चीन र अन्य विकसित मुलुकमा भन्दा बढी हुने सम्भावना छ । त्यस्तै अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायातका कारण रोग छिटो फैलिने र भौगोलिक कठिनाइका कारण समयमा बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन नसक्ने जस्ता समस्याहरू पनि छन् । सहरमा चाहिँं चर्को वायु प्रदूषणका कारण पहिल्यै एलर्जीजन्य समस्या देखिएका कम उमेरकै मानिसहरूमा पनि संक्रमणको जटिलता दर बढी हुने सम्भावना छ ।
के गर्ने र नगर्ने ?
महामारी सुरु भइहाल्नुअगाडि सुसूचित हुने, अफवाहहरूको पछाडि नलाग्ने । कति मदिराप्रेमीहरूबीच ‘रक्सीले कोरोनाबाट बचाउँछ’ भन्ने अफवाह अहिल्यै फैलिसकेको पाइन्छ । मानिसको डर जति बढ्दै जान्छ, त्यति नै सामाजिक सञ्जालमा ‘क्लिक’ र विज्ञापनको खेती गर्नेहरूले यस्ता अफवाहको बाढी ल्याउने निश्चित छ । महामारीबारे अद्यावधिक सूचनाका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको आधिकारिक पृष्ठ हेर्नु उचित र पर्याप्त हुन्छ । महामारीबारे थप सूचना र जानकारीका लागि विश्वासिला स्वदेशी वा विदेशी सञ्चार माध्यम जुन हेरे पनि हुन्छ । अंग्रेजी माध्यमका विदेशी सञ्चार माध्यममध्ये बेलायतको ‘द गार्डियन’ ले यो महामारीको निकै विस्तारित र अद्यावधिक कभरेज गरिरहेको छ ।
यो समयमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा भनेको बन्दोबस्ती हो, जसले चीनको हुवेईमा जस्तो यातायात निषेध भएको अवस्था झेल्न हामीलाई सघाउँछ । कस्तो बन्दोबस्ती गर्ने भन्नेमा विज्ञहरूको अनुभवसिद्ध मत छ । अन्नपात र पानीको जोहो केही महिनाका लागि गर्ने । मुटुरोग, मधुमेह र रक्तचाप लगायत नियमित खाइरहनुपर्ने औषधि पनि केही महिनाका लागि पुग्ने गरी किनिराख्ने । तर अनुहारको मास्क किनेर थुपार्नतिर चाहिँं नलाग्ने । त्यसो गर्दा अहिले नै देखिइसकेको मास्कको अभाव झन् भयावह हुन्छ । त्यो नभई नहुने स्वास्थ्यकर्मीहरू मास्कबाट वञ्चित हुन्छन् र महामारीको उपचार नै प्रभावित हुन्छ ।
बन्दोबस्तीपछिको दोस्रो काम हो— रोग पत्ता नलागिसकेको व्यक्तिबाट आफूलाई रोग सर्ने सम्भावनाको न्यूनीकरण । अहिले रोग फैलिरहेका भनिएका कुनै पनि देश नगएका र तिनबाट फर्केका कसैलाई नभेटेका अमेरिकीलाई क्यालिफोर्नियामा कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएसँगै अहिले महामारीको त्रास झन् बढेको छ । अहिलेसम्म संक्रमण हुने र लक्षण देखिने समयबीचको अन्तर (इन्क्युबेसन पिरियड) १४ दिन मानिंँदै आएकामा २७ दिनपछि समेत लक्षण देखिएकाले पनि थप जटिलता उत्पन्न भएको छ । एक बिरामीलाई संक्रमण भएर निको भएर परीक्षणले नेगेटिभ देखाएको केही समयमा पुन: संक्रमण पोजिटिभ देखिएकाले कोरोना भाइरसबारे धेरै कुरा अझै जान्न बाँकी भएको पनि देखिन्छ ।
खास गरी संक्रमितहरूमध्ये ८० प्रतिशतमा सामान्य लक्षण मात्रै देखिने, तीमध्ये केहीलाई कुनै पनि लक्षण नदेखिन सक्ने हुँदा संक्रमण रोक्न अतिरिक्त सावधानी अनिवार्य छ । त्यसका लागि खास गरी सहरी क्षेत्रहरूमा हुने ठूला भेटघाट रोक्ने वा कम गर्ने, हात नमिलाउने, बारम्बार साबुनले हात धुने, सम्भव भएसम्म भीडभाड हुने साधनहरूमा यात्रा नगर्ने जस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।
यति गर्दागर्दै संक्रमण फैलिहाल्यो वा नजिकको मानिसलाई संक्रमण भइहाल्यो भने के गर्ने ? सावधानी बढाउने तर नआत्तिने । संक्रमण न्यूनीकरणको हरेक उपाय अपनाउने तर संक्रमितहरूलाई अवहेलना र दुरदुर नगर्ने । परिवारका वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी र फोक्सोको समस्या हुने सदस्यहरूको विशेष ख्याल राख्ने ।
सधैंका लागि के सिक्ने ?
पछिल्लो शताब्दीमा आधुनिक चिकित्साले निकै ठूलो फड्को मारेको छ । कोभिड–१९ लाई मार्ने औषधि वा रोक्ने भ्याक्सिन विकसित नभइसके पनि पहिले कहिल्यै नभएका सहायक उपचारविधि अहिले हामीसँग छन् । भाइरसपछि दोहोरो ब्याक्टेरियाको संक्रमण रोक्ने एन्टिबायोटिकदेखि श्वास–प्रश्वासमा फोक्सोलाई सघाउने भेन्टिलेटरहरूसम्मले यो महामारीको मृत्युदर कम गर्न चीनमा निकै मद्दत गरेका छन् । त्यसैले सस्तो र प्रभावकारी भ्याक्सिन नबन्दासम्मका लागि कुनै पनि देशले गर्नसक्ने अधिकतम काम भनेको स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजबुत गरेर अस्पतालहरूलाई यस्ता संकट झेल्न सक्ने बनाउनु हो ।
खास गरी नेपालले ज्यानकै जोखिम मोलेर भाइरसविरुद्धको युद्धमा अग्रपंक्तिमा खडा हुने स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्तता, क्षमता विकास र उत्प्रेरणाको दिशामा धेरै काम गर्न बाँकी छ । चैत–वैशाखको गर्मीले हामीलाई तत्काल संक्रमणको ठूलो तरंगबाट बचाउन सक्यो भने खास गरी सघन उपचार क्षमता विस्तारमा ठूलो लगानी र मेहनत गर्नु आवश्यक छ । नागरिक स्तरबाट चाहिं कोभिड–१९ र यस्तै श्वास–प्रश्वासका महामारीसँग जुध्न समयमै सावधानी अपनाउने, अफवाहहरूको पछाडि नलाग्ने, धूमपान र प्रदूषण घटाउने जस्ता दीर्घकालीन उपाय अपनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि जीवनशैली परिवर्तनदेखि व्यवस्थित सहर विकाससम्ममा सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
चौतर्फी महामारीबारे समाचार सुन्दा अत्यधिक त्रास र निराशा भयो भने चित्त बुझाउन इतिहासकै भयानक महामारीलाई याद गरे हुन्छ— चौधौं शताब्दीको महाप्लेग वा ‘ब्ल्याक डेथ’ भनिने महामारीका कारण युरोपको ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म जनसंख्या सखाप भएको थियो र युरोपको जनसंख्या फेरि उत्ति पुग्न अरू दुई सय वर्ष लागेको थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७६ ०८:४३